UTOP 2016 : hisy mpifaninana frantsay handray anjara | NewsMada
Hotanterahina ny 6 ka hatramin’ny 8 may ho avy izao, ny andiany fahavalo amin’ny “Ultra Trail des Ö plateau à Madagascar” na ny (Utop). Anisan’ny hampiavaka ity andiany ity, ny fisian’ireo mpifaninana avy any ivelany, toa an-dry zareo Frantsay sy Renioney, izay efa zatra mandray anjara amin’ny hazakazaka UT4M, atao any Grenoble sy ny Trail du Colorado any La Réunion.
Eo koa ny fampidirana ny ho ao anatin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, eo amin’ny taranja atletisma ny lalana hizoran’ny «T-rail».
Ankoatra izay, samy omena anjara amin’ity avokoa ny rehetra, mpankafy hazakazaka, izay hifangaro amin’ny fizahana ny tontolo iainana.
Raha 1200 ny mpandray anjara, tamin’ny taon-dasa, manantena isa lavitra noho ny mpikarakara amin’ity. Raha tsiahivina, 120 km ny halaviran-dalana amin’ity andiany fahavalo ity, izay hiala eny amin’ny lohasahan’i Mandraka, mihazo ny tanànan’Antananarivo, mandalo ny farihin’i Mantasoa.
Ankoatra izay, hisy koa ny «sémi-trail» mirefy 65 km, miala ao Mantasoa ary ny “T-rail”, mirefy 30 km, miainga ao Carion.
Ho an’ity taona 2016 ity, miara-miasa amin’ny Utop ny Ultra Trail Raidlight Beach Comber (UTRB) avy any Maorisy. Hisy, araka izany, tompondakan’i Maorisy anankiroa hifaninana ary ny volana jolay, handray izay tompondakan’i Madagasikara anankiroa koa ry zareo Maorisianina.